नेपाली समाजमा दसैंका विविध पक्ष
दसैं नेपाली मात्रको महान् चाड हो । हाम्रो समाजमा बडादसैं र चैतेदसैं भनेर दुईवटा दसैं मनाउने परम्परा छ । दसैं शब्दले दशमी तिथिलाई सम्बोधन गरेको छ । शरद ऋतुको दसैं दशमीकै दिनलाई भनिन्छ तर चैतेदसैं अर्थात् वसन्...
१० कात्तिक, २०७७
के हो मलमास, के गर्न हुन्छ के हुँदैन ?
विक्रम संवतअनुसार आज (शुक्रबार) बाट मलमास सुरु भएको छ । चन्द्रमास अनुसार अबको एक महिना अर्थात् असोज ३० गतेसम्म मलमास रहनेछ । मलमासलाई अधिकमास पनि भनिन्छ । मानव समुदायले समयको निर्धारणका लागि प्रमुख ...
आमाको तिथिमा महालय पार्वणश्राद्ध गर्न किन नहुने ?
हिन्दु परम्पराअनुसार यतिबेला सोह्रश्राद्ध चलिरहेको छ । आश्विन कृष्णपक्षका १५ दिन र पूर्णिमाको एक दिन गणना गरी १६ तिथिलाई यसमा समेटिएको छ । यसलाई महालय पार्वणश्राद्ध पनि भनिन्छ । ‘श्रद्धया क्रियते इति श्राद्...